Diyaarad Sidday Dad 300 Ah Oo Iyadoo Gubanaysa Fadhiisatay Garoonka Magaalada Dubai | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Diyaarad Sidday Dad 300 Ah Oo Iyadoo Gubanaysa Fadhiisatay Garoonka Magaalada Dubai
August 5, 2016 - Written by Mustafe Faro
Dubai(Hubaal):- Diyaarad ay leedahay Shirkadda Diyaaradaha ee Emirates Airline, ayaa ku dhacday iyadoo ku dagaysa garoonka Diyaaradaha ee magaalada Dubai. Dhammaan 300 oo Qof oo saarnaa, ayaa ka badbaaday Shilkaas oo Dab dhaliyey. Diyaaradda ayaa u eg inay ku soo degtay Caloosheeda, Sawirrada ayaa muujinaya qiiq madoow oo ka soo baxaya gudaha Diyaaradda. Diyaaraddaas ayaa ahayd nooca loo yaqaanno Boeing 777 ayaa ku degaysay Madaarka Dubai, iyadoo ka timid gobolka Kerala oo ku yaalla Koonfurta waddanka Hindiya.
Dowladda Dubai ayaa sheegtay in dhamaan rakaabkii saarnaa diyaarada laga soo dajiyay si nabad ah, mana jiraan dhaawac la sheegay. Diyaaradaha imanaya iyo kuwa duulaya ayaa la joojiyay dhowr saacadood, laakiin hadda dib ayay u bilaabmeen. Dadkii saarnaa diyaarada ayaa u sheegay Reuters in ay ahayd wax naxdin badan.
“Annagoo degi rabna ayaan aragnay qiiq ka imanaya gudaha diyaarada ayay dhahday Sharon Maryam Sharji. Dadka way qaylinayeen si aad u adag ayaan u degnay. Waxaan degnay inagoo is ticmaalayna meelaha sida degdega looga, markaan ka baxaynay jidka garoonka waxaan arkaynay holac qabsaday diyaaradda oo dhan.” Kuwaasi waxay ka mid ahaayeen hadalladii Rakaabka diyaaradda saarnaa ay Saxaafadda siiyeen.
Masuuliyiinta Shirkadda Diyaaradaha Emarites Airline, ayaa sheegay inay saarnaayeen diyaaradda 282 oo Rakaab, 18 shaqaale oo ka kala yimid 20 waddan. Dadka intooda badan waxay ahaayeen Hindi, 24 British ah iyo 11 qof oo ka yimid UAE. Markaad fiirisid burburka diyaaradda, lama malaysan karo inaan hal qofna ku dhiman.
Waxaa jira warar kala duwan oo sheegaya sababta ay u dhacday diyaaradda. Diyaaradda ayaa loo jeedaa inay degtay iyadoo cagaha aysan u bixin. Laakiin maalmaha soo socda ayaa la ogaan doonaa sababta keentay shilka.